သင်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကူညီပေးနိုင်မယ့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ( ၁၄ )ခု – Global POS & GOLD
တခါတလေ “အိမ်မှာနေပြီးလုပ်ငန်းတခုတည်ထောင်ချင်ကြတယ်၊ အွန်လိုင်းBusinessလုပ်ချင်ကြတယ်” စတဲ့အတွေးပေါင်းမြောက်မြားစွာနှင့် စိန်ခေါ်မှုတွေလုပ်ချင်ကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလုပ်ငန်းကိုစလုပ်ဖို့အတွက် သေချာပြန်တွေးကြည့်ရင် ထောင်ပေါင်းမကကြိုးစားဖူးပြီးပြီလို့ ခံစားနေမှာအသေချာပါပဲ။
အိမ်မှလုပ်‌ဆောင်နိုင်တဲ့ အွန်လိုင်းစီးပွားရေး ၇ နည်း
သန်းပေါင်းများစွာသော ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ ကိုယ့်အိမ်ကို ရုံးတခုအဖြစ်မြင်ကြတာမဆန်းပါဘူး။ အောက်ဖော်ပြတဲ့ အချက်တွေကတော့ သင့်အတွက် အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက် အကျိုးရှိစေမဲ့ အမျှော်အမြင်သစ်တွေကို အသုံးချပြီး ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာမှာအေးဆေးနေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Dropshipping ကတော့ အိမ်မှာနေပြီးစီးပွားရေးလုပ်လို့ကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Dropshipping ဆိုတာကတော့ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို ဖြန့်ဝေတဲ့သူ(သို့မဟုတ်)ထုတ်လုပ်တဲ့သူဆီကနေဝယ်ပြီး Customer ဆီတန်းပို့ပေးတာကိုဆိုလိုပါတယ်။ တခြားE-commerce စီးပွားရေးဈေးကွက်တွေနှင့် ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Dropshipping က ဈေးကွက်ထဲဝင်တာ နည်းနေလိမ့်မယ်။ သင့်အနေနှင့် ပစ္စည်းတွေအများကြီးဝယ်ရမှာ ကုန်တင်/ကုန်ပို့လုပ်ရမှာတွေစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဖြန့်ဝေတဲ့သူ ကိုယ်တိုင်က ဒီတာဝန်တွေကို သင့်အစားလုပ်ဆောင်မှာမို့လို့ပါပဲ။ သင့်အနေနှင့် Stock ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ထားစရာမလိုတာ‌ကြောင့် ပစ္စည်းမျိုးစုံတင်ရောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ အလှကုန်ပစ္စည်း၊ စားသောက်ကုန်၊ အိမ်သုံးပစ္စည်း၊ အင်္ကျီ၊ နိုင်ငံခြားကုန်ပစ္စည်းစသည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖြန့်ဝေသူအနေနှင့် Stock ဝယ်ထားတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေရှိနေရင် သင်ရဲ့ Online Store မှာ အပိုကုန်စရိတ် မကုန်ဘဲနှင့် တင်ပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်သာ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်၊ ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် လူအများအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ Brand တခုဟုတ်နေမယ်ဆိုရင် Print on demand နည်းက သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသော လုပ်ငန်းတခုဖြစ်စေမှာအမှန်ပါပဲ။<br /> Print on demand ဆိုတာကတော့ ဖြန့်ဝေတဲ့သူဆီက ကုန်ကြမ်းယူပြီး မိမိကိုယ်ပိုင် အမှတ်တံဆိပ်ရိုက်တာကိုဆိုလိုပါတယ်။ အများသိတဲ့အသုံးဆိုရင် T-shirt၊ လွယ်အိတ်‌ စသည်တို့ကို မိမိကိုယ်ပိုင်ဒိဇိုင်းနှင့် တံဆိပ်ရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခုရဲ့ ကောင်းကွက်ကတော့ ပစ္စည်းမရောင်းရမချင်း ကုန်ပစ္စည်းဖိုးမရှင်းရတာပါပဲ။ Dropshipping နှင့်နည်းတူ လက်ထဲ ဘာပစ္စည်းကိုမှ သိုထားဖို့မလိုပါဘူး။
တကယ်လို့သင်သာ ငယ်ငယ်ကတည်းက အသစ်အဆန်း ပစ္စည်းတွေဖန်တီးချင်တဲ့စိတ်ရှိရင်တော့ Handmade ပစ္စည်းလုပ်ပြီးရောင်းတာကလဲ ကိုယ့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုကို ပြသတဲ့အပြင် အိမ်မှာနေပြီး ပိုက်ဆံရှာတဲ့နည်းလမ်းတခုပါပဲ။ လုပ်ချင်ပေမဲ့ အတွေ့အကြုံမရှိသေးလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် ဘာရောင်းရမယ်ဆိုတာ တွေဝေမသွားကြပါနှင့်။ ပြဿနာတိုင်းအတွက်အဖြေရှိပါတယ်။ သင့်အိမ်ကို ပတ်ပတ်လည်လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။ သင်လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတချို့ လိုအပ်နေမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဘိလပ်မြေအလှပန်းအိုး၊ ‌ရောင်စုံစားပွဲခင်းစတဲ့ ပစ္စည်းတွေလိုနေသလား? အင်တာနက်ပေါ်လေ့လာပြီး ဆိုင်ကြီးတွေမှာ ဘာပစ္စည်းတင်ရောင်းနေသလဲ ကိုယ်တင်မဲ့ ပစ္စည်းနှင့်တူနေမလားစသည်ကို သေချာစာရင်းပြုစုကြည့်ပါ။ သင့်အနေနှင့် ဘာရောင်းရမလဲဆိုတာ သေချာအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင် တစိုက်မှတ်မှတ် လက်တွေ့ အသုံးချနိုင်ပါပြီ။
အခုနောက်ပိုင်း e-learning က တနေ့တနေ့ကျယ်ပြန့်လာတာနှင့်အမျှ လုပ်ငန်းတခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Digital product ရောင်းခြင်းက အွန်လိုင်းစီးပွားရေးကောင်းတခုဖြစ်လာမှာသေချာပါတယ်။ ဥပမာ- သီချင်း၊ ဇာတ်ကား၊ ebook နှင့် အွန်လိုင်းသင်တန်းတွေကို စားသုံးသူအနေနှင့် အချိန်မရွေး download ဆွဲပြီး မိမိစိတ်တိုင်းကျ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Digital product တွေဟာဆိုရင် အရင်းအများကြီးမလိုဘဲနဲ့ စီးပွားရေးကောင်းတခုဖန်တီးနိုင်မှာအသေချာပါပဲ။ ဥပမာအနေဖြင့် သီချင်းတပုဒ်ကို တခါဆိုလိုက်တာနဲ့ သိုလှောင်စရာမလိုဘဲ လူသန်းပေါင်းမြောက်မြားစွာကို ရောင်းချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့သာ သင်လုပ်နေတဲ့ digital product ရဲ့ topic ပိုင်မယ်ဆိုရင် အလုံးရင်းအကြီးကြီး/လချင်းပေးအထိ ရောင်းနိုင်မှာ အသေချာပါပဲ။
ဂိမ်းကစားခြင်းဟာဆိုရင် အရင်ခေတ်နှင့်မတူ ဝင်ငွေရှာနိုင်တဲ့ အဆင့်ထိရောက်ရှိလာတာကို သိကြမှာပါ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ ဂိမ်းနှင့်ဆိုင်တဲ့ ဘွဲ့တွေ၊ Sponsorship တွေယူနိုင်သည့်အပြင် esport professional gamer တယောက်အနေနှင့်လဲ ရပ်တည်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းတွေရဲ့ လုပ်ငန်းတန်ဖိုးဟာဆိုရင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.7ဘီလီယံနှင့်အထက်မှာရှိနေပါတယ်။ Video gameတွေက ခုနကပြောသလို ဝင်ငွေရှာနိုင်တဲ့ အဆင့်ထိရောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့် ဝင်ငွေရလွယ်တဲ့နည်းလမ်းတခုဆိုလဲ မမှားပါဘူး။ ဒါ့အပြင် သင်ကသာ သင်ကစားနေတဲ့ ဂိမ်းတွေကို ကျွမ်းကျင်မယ်ဆိုရင် Twitch.tv နှင့် Youtube တွေမှာပါ streamပြီး အပိုဝင်ငွေရစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းပေါ် အလှဓာတ်ပုံတင်ရောင်းတာက သမရိုးကျစီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ Getty Images၊ Shutterstock၊ iStock၊ 500px နှင့် Stocksy စတဲ့ websiteတွေမှာ ဓာတ်ပုံတင်ရောင်းလို့ရတာ အသေချာပါပဲ။အွန်လိုင်းပေါ် အလှဓာတ်ပုံတင်ရောင်းတာ အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် အရေးကြီးဆုံးသိထားသင့်တဲ့ အချက်(၃)ချက်ရှိပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ သင်ကဘယ်လို ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာ အားသန်လဲ? ပန်းပုံလား? ရှုခင်းပုံလား? လူပုံလား? စသည်ဖြင့် သင့်ရဲ့ အားသန်ရာကို အရင်သိအောင်လုပ်ပါ။ ကြည့်ရှုတဲ့သူ ရှာပါ။ ဓာတ်ပုံရောင်းအား‌ကောင်း/မကောင်းက သင့်ရဲ့ ဆန်းသစ်တဲ့ အတွေးအခေါ်ပေါ်ပဲသက်ရောက်နေမှာပါ။ Idea ကောင်းလာတာနှင့်အမျှ သင့်social media ပေါ်ကြည့်ရှုသူများလာမှာ ဧကန်မှုချပါပဲ။ နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံ ရောင်းနိုင်သမျှရောင်းပါ။ Site တခုမှာပဲ တင်ရောင်းတာမဟုတ်ဘဲ သင်ကိုင်တွယ်နိုင်သလောက် Social media platform မျိုးစုံတင်ရောင်းကြည့်ပါ။ နည်းလမ်းစုံလာလေလေ ပိုက်ဆံဝင်ရလွယ်ကူလေလေဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်တာက ဝါသနာအရဖြစ်စေ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအရဖြစ်စေ အွန်လိုင်း‌ပေါ်တင်ရောင်းခြင်းက သင့်အတွက် အပိုဝင်ငွေရှာရလွယ်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နေမှာ အသေချာပါပဲ။
သင်စာရေးရတာ ဝါသနာပါသလား? ကိုယ့်နာမည်နှင့် စာအုပ်တွေထုတ်ဝေတာကို သင်စဉ်းစားဖူးလား? ကောင်းပါပြီ၊ ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဝေတဲ့ စာရေးဆရာတစ်ယောက်အဖြစ်ကတော့ စီးပွားရေးအသေးစားထဲက အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတခုပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဝေသူဆိုတာက တခြားနာမည်ကြီးစာတိုက်နှင့် လက်တွဲလုပ်တာမဟုတ်ဘဲ အကုန်လုံးမိမိတာဝန်ယူပြီး ထုတ်ဝေတဲ့အထိ လုပ်ဆောင်တာကိုဆိုလိုချင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်စာဖတ်သူများလာတာနှင့်အမျှ websiteတွေမှာ e-book အနေနှင့်ရော audio bookတွေကိုပါ တင်ရောင်းခြင်းကလည်း အပိုဝင်ငွေရစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Web ပေါ်မှာ ထောင်ပေါင်းများစွာ ရှိတဲ့ ecommerce စီးပွားရေးကို သင့်အနေနဲ့ ဘယ်ကစတင်သင့်သလဲ? သင့်အနေနဲ့ အင်တာနက်ပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ရတာ နှစ်သက်သဘောကျရင်တော့ အောက်က အချက်တွေက သင့်အတွက် အကျိုးရှိစေမှာ အမှန်ပါပဲ။
စီးပွားရေးလုပ်ရင်းနဲ့ ပျော်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေ ရောင်းဝယ်ရေးကလဲ အကြံကောင်းတစ်ခုပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းမျိုးစုံ ရောင်းရလို့ပါပဲ။ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်မွေးတဲ့သူအများစုက သူတို့ရဲ့ အမွှေးပွ အကောင်လေးတွေကို သားသမီးသဖွယ် ကျွေးမွေးတာကြောင့် သင့်ပစ္စည်း အပေါ် ပိုက်ဆံသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ဓာတုကင်းစင်တဲ့အရာတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ စားစရာတွေနဲ့တချို့ပစ္စည်းတွေကိုဆိုရင် ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေအဖြစ်နဲ့ပါရောင်းချနိုင်ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ dropshipping စီးပွားရေးထိ တိုးချဲ့နိုင်သလို အိမ်ဆိုင်လေးအနေနှင့်လည်း ဝင်ငွေကောင်းလာစေမှာပါ။ လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုအမြဲတမ်း ဂရုစိုက်ပြီးပျော်ရွှင်အောင်ထားမှာသေချာနေတာကြောင့် သင့်အတွက် အဆင်ပြေတဲ့ အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ အသေအချာပါပဲ။
အဝတ်‌ဟောင်းတွေရဲ့ ဈေးကွက်က အမေရိကန်‌ဒေါ်လာ ၂၄ ဘီလီယံရှိတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား? သင့်အနေနဲ့ အဝတ်ဟောင်းတွေရှိရုံနှင့် အပိုဝင်ငွေရှာရ လွယ်ကူတဲ့ စီးပွားရေးကို စနိုင်မှာအသေချာပါပဲ။ ခေတ်သစ်နည်းပညာတွေကို အသုံးချပြီး သင်မလိုအပ်တဲ့ အဝတ်တွေကို အလွယ်တကူ အွန်လိုင်းပေါ်တင်ပြီးရောင်းနိုင်တာကြောင့် အမြတ်ရစေတဲ့ အွန်လိုင်းစီးပွားရေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
Freelance အလုပ်ကတော့ အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ မျက်မှန်းတမ်းမိစေတဲ့ အရာတစ်ခုပါပဲ။ Freelancer ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ရုံးဝန်ထမ်းအမြဲတမ်းဖြစ်စရာမလိုတဲ့အပြင် သင့်အလုပ်ကို ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ လုပ်နိုင်သလို သင့်ရဲ့ Boss က သင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Freelance လုပ်တဲ့ စီးပွားရေးတွေ ထိုးတက်လာတာနှင့် အမျှ Freelance လုပ်ပြီး အောင်မြင်တဲ့ Online Business တစ်ခုအနေနဲ့သင့်ရဲ့လိုရာပန်းတိုင်ကိုလျှောက်လမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Freelanceလုပ်တယ်ဆိုတာကလဲ အခက်ခဲများစွာရှိပါတယ်။ သင်အလုပ်ကျွမ်းကျင်ဖို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်ကုန်ရသလို ပိုက်ဆံမြောက်များစွာလဲ ရင်းနှီးရမှာ အသေချာပါပဲ။ ဥပမာအနေနှင့် web design, marketing, copywriting, app developing စတာတွေကို အိမ်မှာနေပြီး freelance အဖြစ်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ်။
4 Other Entrepreneurial Opportunities
၀င်ငွေသန်းပေါင်းများစွာရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို သင်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ ဆန္ဒတွေရှိကောင်းရှိသလို လုပ်ငန်းသေးသေးနှင့် ပြည်တွင်းအလုပ်ပဲလုပ်ကိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်လဲ အကျိုးရှိစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
Follower နှင့် Like တွေကို ပိုက်ဆံအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တာ သင်စဉ်းစားဖူးပါသလား? သင့်ကို ဆိုရှယ်မီဒီယာ နာမည်ကြီးတဲ့လူဖြစ်အောင် အခုက အချိန်ကောင်းတခုပါပဲ။ ဒီစီးပွားရေးက လုပ်ကိုင်ဖို့ ခဲယှဉ်းတယ်ထင်ပေမယ့် မြောက်များစွာသော လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များစွာမှာအောင်မြင်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဥပမာ ခရီးသွားခြင်း၊ အလှအပရေးရာ၊ အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်သည့်ပစ္စည်း စသည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းကတော့ သင့်ကို လူသိများလာအောင် အချိန်ပေးရမှာအသေချာပါပဲ။ တကယ်လို့သာ သင့်ဆီမှာ စိတ်ကူးကောင်းကောင်း အပြောဆိုကောင်းကောင်းနှင့် စိတ်ပါဝင်စားမှုများရင်‌တော့ ဒီလုပ်ငန်းက ပရိတ်သတ်ပေါ်မူတည်ပြီး ပိုက်ဆံရစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
www.neighbor.com ဝက်ဆိုဒ်ဟာဆိုရင် သင့်အိမ်မှာရှိတဲ့ အခန်းပိုတွေကို တခြားသူတွေ ပစ္စည်းထားလို့ရအောင် ငှားရမ်း ပေးတဲ့ website တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းကတော့ ဝင်ငွေရအလွယ်ဆုံးဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းသိုလှောင်တဲ့ နယ်ပယ်မှာ တန်ဖိုး အမေရီကန်ဒေါ်လာ ၃၈ ဘီလီယံထိရှိပါတယ်။ အကျဉ်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် သင့်အနီးနားတဝှိုက်နေတဲ့ သူအတွက် ဈေးကြီးပေးပြီး ပစ္စည်းထားတဲ့နေရာသွားမယ့်အစား သင့်အိမ်မှာပဲ အလွယ်တကူအသုံးပြုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ‌ဒေါ်လာ ၉၉၀ ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့ အစားသောက်တွေကို လွှင့်ပစ်နေကြပါတယ်။ ဒါတွေက ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လဲ ဆိုးကျိုးများစွာ ထိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေက နည်းလမ်းအသစ်တွေနှင့် မလိုအပ်တဲ့ စားသောက်ကုန်တွေကို အမြတ်အဖြစ်ဖန်တီးကြပါတယ်။ အပြင်ပန်းမလှတဲ့ အသီးအရွက်တွေကိုလဲ ဈေးသက်သက်သာသာနှင့် ဘူးထဲထည့်ပြီး ရောင်းနိုင်သလို အစားသောက်ကျန်တွေကို စက်သုံးဆီ၊ ပိုးကောင်တွေရဲ့ အာဟာရ အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Local ဈေးကွက်တခုဖန်တီးပြီး သီးသန့်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။
GlobalPOS ကနေ Retail နှင့် Wholesale လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အသုံးဝင်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေနဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ GlobalPOS Page လေးကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် . . .